Vaovao - Fomba fitsaboana amin'ny gorodona vita amin'ny alimina
Firy ny karazana takela-by vita amin'ny metaly? Aiza no ampiasaina azy?
Ny gorodona eo ambonin'ny takelaka aluminium dia mety hitranga amin'ny fizotran'ny fanodinana takelaka aluminium. Matetika izy io dia vokatry ny fanodinana tsy mety, izay mahatonga ny faritra simba, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny estetika amin'ny takelaka aluminium. Na izany aza, efa niseho ireo ratra. Ity manaraka ity dia manoritsoritra ny fitsaboana rakotra ny takelaka aluminium. fomba.
Ny gorodona ivelany amin'ny takelaka aluminium dia azo tsaboina. Raha fintinina dia misy fomba roa: ara-batana sy simika: ny fomba fiasa ara-batana dia ny famolahana mekanika, indrindra ny fametahana fasika, ny fanaovana tariby, sns. Ity fomba ity dia matetika ampiasaina amin'ny gorodona lalindalina kokoa. Ny fomba simika amin'ny ankapobeny dia mampiasa reagents simika amin'ny poloney. Raha fintinina, ny reagents simika dia ampiasaina hanimba ny tampon'ny aluminium. Manana sisiny maranitra ireo rangotra ireo ary haingana ny hafainganam-pandehanany. Ny gorodona maivana kokoa dia azo esorina tanteraka aorian'ny fanosotra simika simika. , Ny fitaovana voadio simika dia manana endrika marevaka sy tsara tarehy. Amin'ny ankapobeny, ny fomba roa dia ampiasaina miaraka, ary ny fisehoan'ny aliminioma dia mety hahatratra vokatra tsara haingo.
Ny vahaolana amin'ny gorodona eo ambonin'ny takelaka aluminium:
1. Ny fehin-kibo miasa amin'ny lasitra lovia vita amin'ny alimika dia mila diovina milamina, raha ampy ny antsy tsy misy ny bobongolo extrusion, ary na malama ny atiny.
2. Mandritra ny famokarana takelaka aliminioma firaka, tandremo ny famokarana tsipika bobongolo. Raha vantany vao teraka ny tsipika, dia mila entina ara-potoana ny bobongolo mba hampijanonana ny famokarana.
3. Amin'ny dingan'ny tsofa aluminium, ny tsofa tsirairay dia mila manadio ny sawdust manapaka amin'ny fotoana. Fisorohana ny rangotra faharoa.
4. Toy izany koa, amin'ny fizotran'ny takelaka alimina machining CNC, ilaina ihany koa ny fisorohana ireo sisa tavela amin'ny aliminioma eo amin'ilay fametahana tsy hikororohana.
5. Misy fampidirana mafy ao amin'ny mombamomba ny alimina indostrialy na ny takelaka grafita eo amin'ny lalan-kaleha na eo am-pandriana. Halaviro ny gorodona eo ambonin'ny takelaka aluminium rehefa mifangaro amin'ny takelaka aluminium ny fako mafy.
6. Eo am-panaovana ny famokarana sy ny fikirakirana, tantano am-pitandremana ary andramo ny tsy hisintona na hamily ny takelaka alimina alimina araka ny sitrapony.
7. Alamino araka ny antonony ireo takelaka aluminium ary ezaho ny tsy hifandona.